Izibonakaliso zokuqala ukuthi ukuzalwa kwaqala
Ukukhulelwa kuyafika ekupheleni, ukuhlangana nomntwana osalinde isikhathi eside ngokushesha! Futhi-ke isipiliyoni siqala! Uma konke kuqala, ngokuqondile, futhi ngokujwayelekile, kuzocaca ukuthi ukuzalwa sekuqalile kakade? Futhi kuthiwani? Cabanga ngezibonakaliso zokuqala ukuthi ukuzalwa kwaqala.
Ukubeletha kungavamile ukuqala ngokuzumayo - isilwane esihlakaniphile kufanele 'sixwayise' umama (amaviki amabili kuya kwangu-2-4) ukuthi umzuzu X uhlala eduze kwekhoneni. Isizinda se-hormone siyashintsha: i-progesterone "yokuqapha" ukukhulelwa ingaphansi kwesihlahla somuthi we-estrogen ne-oktocin, ekulungiselela kancane kancane umsele wokuzala womsebenzi ozayo. Iqiniso lokuthi le nqubo isivele ihambe, bathi izandulela zokubeletha.
I-abscess esiswini (ukunciphisa ukuphakama kwesisu): Ukwenza umama kube lula ukuphefumula, kodwa kufanele ugijimele endlini yangasese kaningi (ngenxa yokucindezela kwesibeletho esibelethweni). Lesi sibonakaliso sichazwa ngokukhethekile kubesifazane abakhulu abangakwazi ukuziqhayisa ngezwi elihle lesodonga sangasese sangasese nesisu, kepha "umama kabili" akakwazi ukubona lutho ngalokhu.
Izinsolo ezingamanga ekuqaleni kwesibonakaliso sokuthi umsebenzi usuqalile ukuphazamiseka ngezikhathi ezithile kwesibeletho (uma kuqina, njengetshebe), ukulungiswa okukhethekile komzimba wokuzalwa okuzayo. Ukusuka kwangempela abavamile futhi ababuhlungu.
Ukusuka kwe-plug yomswakama (i-mucus yomlomo wesibeletho evala ukungena kwesibeletho) kwenzeka ngegazi, lokhu kuvamile. Kungenzeka ngesonto, nezinsuku ezimbalwa, namahora ambalwa ngaphambi kokubeletha. Lesi isignali ukuthi umlomo wesibeletho ulungiselela kahle. Nokho, ngokuvamile akuyona ithuba lokuya esibhedlela (ngaphandle uma kuhambisane nokulwa okulodwa). Ukungazinzi ngokomzwelo kuhlobene ngokuqondile nezinqubo ze-neuroendocrine ezenzeka emzimbeni. Ukunganakwa kungasuswa ngokuzumayo ngesenzo esivunguvungu, isimo se "esidlekeni" sibonakala ngokucacile: Umama ususa endlini, ngomzuzwana wokugcina ugijima ukuthenga i-dowry yemvuthu ... Ngokuvamile, amandla nekhono alungiselela umhlangano wengane!
Ukuguqula ukudla: kukhona into enqabile kakhulu ... Ngisho noma konke ukukhulelwa kwakunzima "kokubili." Ukwehla kwesisindo somzimba ngenxa yokuntuleka kwesidlo. Ngaphambi kokubeletha, owesifazane angalahlekelwa isisindo - 1-2 kg. Ngakho umzimba ngokwemvelo ulungiselela ukubeletha.
Ukuba khona kwazo zonke izandulela ngesikhathi esisodwa akudingekile nhlobo - izibonakaliso ezimbili noma ezintathu zanele ukuqonda: maduzane!
Bheka udokotela uma ... Umsebenzi womoto we-fetus ushintshile ngokuphawulekayo.
Ngokuvamile, ngaphambi kokuzalwa, kunciphise kancane (ingane inkulu, isesiswini esiseduze). Kodwa nokho ulalele wena nomuntu oyedwa - ngubani owazi kahle "umbuso" wakhe? Uma le kid livele likhuthele kakhulu, mhlawumbe engenakho i-oksijeni, uma ihlale ithulile isikhathi eside (ngaphezulu kwamahora angu-6 emini) - nakanjani into ayiphutha. Kungcono ukuthi uphephe - ukuhlolwa okungeziwe: i-cardiotocography, i-ultrasound. Kwakukhona ukukhanya okukhanyayo kusuka kwesifazane. Lokhu kungenzeka ngenxa yokwesaba kokubeletha ngaphambi kwesikhathi noma ukuphazamiseka kwamapayipi (inqola, isethulo). Noma yikuphi ukucindezeleka noma ukunyakaza kungakhuphula ukuphuma kwegazi, ngakho ngokushesha shayela i-ambulensi!
Kuyinto efiselekayo ukuya esibhedlela kusengaphambili uma owesifazane esengozini:
- ukonakala kwesibeletho (okuphindaphindiwe);
- isithelo esikhulu;
- isethulo sangasese;
- inkinga yokukhulelwa;
-placenta ukunamathela (lapho ivala ukuphuma esibelethweni);
- extragenital engapheli (engahlotshaniswa nesifo sofuba).
Ilotshana nge "iphutha"
Ukuphuma kwe-amniotic fluid. Yebo, odokotela bacabanga ukuthi lokhu kuphulwa kwesimo esifanele - ngokuvamile ukuphuma kuvela ngokudalulwa ngokugcwele komlomo wesibeletho. Izizathu zihluke kakhulu: ukwanda kwe-uterine ithoni, ukutheleleka kwezingqimba, i-polyhydramnios, ukukhulelwa okuningi, njll. Futhi ngezinye izikhathi kuyisici esisodwa sowesifazane, okuphindaphindiwe kusukela ekuzalweni kuya ekubelethweni. Ukuze uqonde ukuthi amanzi alula: ukugeleza ketshezi, ukuthululela ngokuzumayo, kungekho lutho olungeke ulidibanise. Futhi uma amanzi evuza nje? Kubalulekile ukwazi ukuthi ukuphuma akukwazi ukumiswa umzamo we-muscle (njengokuvuthwa), futhi amanzi ngokwawo angenasiphelo, kaningi ngokusobala (okuluhlaza okwesibhakabhaka - isibonakaliso senkinga, ingane ayinayo i-oxygen eyanele, iphuthumayo esibhedlela!).
Yini okufanele ngiyenze?
Xhumana nodokotela futhi ube ngaphansi kokuqondisa kwakhe. Okufanelekile, ingane kufanele izalwe emahoreni angu-24 alandelayo, uma kungenjalo amathuba okutheleleka akhula (kungenzeka, ukwelashwa kwama-antibacterial kuyodingeka) ngezibonakaliso zokuqala ukuthi umsebenzi usuqalile. Amahora angu-12 okuqala odokotela nje abheka owesifazane futhi elinde ukuqala kwezibhamu ezivamile. Umsebenzi we-Generic awusizo masinyane? Khona-ke kuyodingeka ukuthi ivuselelwe i-oxytocin enomzimba.
Ubuhlungu bokuqala. Okunye okungafani okungafani nokuqala komsebenzi. Leli yigama lezinkinga ezingavamile ezibuhlungu zesibindi, okungafani nezinsizakalo ezingaholela ekuvuleni kwesibeletho. Kuvela "umsebenzi" ongenamsebenzi futhi okhandlayo, okuvela kuwo owesifazane ngokushesha ukhathele, ngakho-ke, umsebenzi wezinhlanga oye wavela ngemuva ungase ube buthakathaka.
Lapho usendlini, owesifazane angathatha iphilisi "Cha-shpy" futhi alale phansi. Awuzange usize? Khona-ke esibhedlela: okokuqala, udokotela uzobona ukuthi ukulwa akusebenzi, bese unikeza "imithi yokulala" emincane, okuzokwenza owesifazane azuze amandla futhi ahlanganyele ngokugcwele emisebenzini yobudala.
Konke ngokusho kohlelo
Ngokuvamile, umsebenzi uqala ngomsebenzi. Akunzima ukuzifunda: ziyizicucu ezivamile zomsindo we-uterus musculature, ezizwa sengathi zicindezela esiswini futhi ziphansi (okufana nobuhlungu ngesikhathi sokuya esikhathini). Ukuqhuma kokuqala kuphendulwa njalo emaminithini angu-20-25 (ubude 10-15 imizuzwana), kodwa kancane kancane isikhathi esiphakathi kwabo sincishisiwe, futhi ukunyuka kwanda. I-cervix ivula kancane kancane, ilungiselela ukukhulula ingane. Siyakuhalalisela - usesikhathini sokuqala sokuzalwa! Ngandlela-thile, cishe sonke lesi sikhathi ungasichitha ekhaya, esimweni esivamile, hhayi ukwesaba - ikakhulu uma ubeletha okokuqala. Esikhathini sesibhedlela yisikhathi, lapho isikhathi esiphakathi kwezingqinamba sanciphisa imizuzu engu-10, ukuzungeza ngakunye kuqhubeka cishe imizuzwana engu-20. Kodwa-ke, akubavimbeli ukuba bangasheshi - isikhathi sokuphulukiswa komlomo wesibeletho kuphindwe kabili.
Kuqalile! Yini okufanele ngiyenze?
Gcina ithrekhi ngobude bokulwa nezikhathi phakathi kwabo.
Hambisa, bheka izikhundla ezidambisa ubuhlungu. Zama ukuhamba nxazonke, ume kuzo zonke ezine, ugibele ibhola elikhulu.
Khipha njalo isisindo - lokhu kuvuselela iziphambano.
Ukuzibandakanya ezinqubo zokuhlanzeka - uma ngabe isilonda sesisu siphelile.
Thatha ama-painkillers - kungenzeka ukuthi angalimaza kunokuba asize.
Yebo (vimbela ukuhlanza ngesikhathi sokubeletha). Ukwesaba (isimo sakho sithonya isimo somntwana).
Isikhathi sokuqala sokubeletha (lapho owesifazane efika esibhedlela) siphelela ngokudalulwa ngokugcwele komlomo wesibeletho - kuze kube ngu-10 - 11 cm. E-primiparas, ubude bayo buyihora lama-12-14, omama abanolwazi - 5-6.
Isikhathi sesibili sifushane kakhulu: imizuzu engu-30-40 "omusha", i-15-20 - ngokuba "ihlelwe". Umlomo wesibeletho usulungele ukweqa ingane, futhi uqala ukuhamba emgodini wokuzalwa (hhayi kusengaphambili, kodwa ulungiselele "convolutions" womama, okwenza uchungechunge lwezinyathelo zokuhumusha nokujikeleza). Ngalesi sigaba, imizamo yengezwa ekulwa (akusikazi nje imisipha yesibeletho, kodwa futhi i-diaphragm, isisu nesisu somfazi wesifazane), ngenxa yokuthi yonke "ibhizinisi" iphelile. Nakhu, umzuzu osalinde isikhathi eside!
Isikhathi sesithathu sokuzalwa. Wahlala encane kunazo zonke - ukubelethwa kokubeletha (le-placenta, i-membrane, intambo ye-umbilical kanye ne-posterior amniotic fluid). Ibolno ngokuphelele futhi hhayi isikhathi eside (kufika kumaminithi angu-30)!
Kulezi zinambuzane namuhla, kuvamile ukunciphisa le nqubo ngomjovo we-oxytocin (okhuthaza ukuchotshozwa kwe-uterine futhi unciphise ukubola kwesisu ngemuva kokubeletha). Khona-ke bayamhlola (akukho lutho olusele emgodini wesibindi). Uma kunesidingo, lo wesifazane ugxiliwe, bese ubeka umntwana esifubeni. Eminye amahora amabili (isikhathi sokuqala sokuhamba kwesikhathi), umama nengane bayoba ngaphansi kokuqondiswa odokotela. Futhi-ke ungakwazi ukuphumula!
Kuze kube nini, bufushane kangakanani?
Isikhathi sokubeletha sithinteka yizinto eziningana:
- iminyaka yobudala besifazane (eminyakeni engama-35-40 eminyaka - isikhathi eside, ngenxa yokunciphisa ukuqina kwezitho zangasese);
- Isisindo somntwana (esikhulu, esingaphezu kuka-4 kg, ukuzala kunzima kakhulu);
- ukuvama kanye namandla okuphambana (inkomba ngayinye);
- isici sesethulo se-fetus (enekhanda - elula).
Emva kokuzalwa: ubulili bokuqala, okokuqala ngenyanga
Ukudla okuqukethwe kwamafutha ngemva kokubeletha
Ukulungiswa kwamahomoni esikhathini sokuhamba kwesikhathi
Ukuzalwa ngaphambi kwesikhathi, izimpawu
Isigaba se-Caesarea: izinzuzo nezingozi
Ukudiliva ekhaya nokubeletha komgwaqo
Izambatho zangaphansi zesifazane
I-Vietnamese Soup Fo
Ukukhulumisana okungenamazwi, izimpawu zamanga ezifihliwe
I-Alaska i-pollack fish: izakhiwo eziwusizo
I-Nutrigenomics: indlela entsha yobuhle nempilo
Indlela yokuhlobisa indlu yomshado
Ukwenqaba ushukela nosawoti
Inhlanzi nge-lemon nama-alimondi
Kunokuba kungcono ukusula isikhumba samafutha?
Iphunga ice cream nge amabhisikidi
Izindlela zokufundisa ingane ukufunda
Ksenia Sobchak "vparivaet" abalandeli bezicathulo ezibuzayo
Yelulela phansi edilini endlini
Ukwanda kwengcindezi yegazi ngesikhathi ukhulelwe